Kukhona inganekwane ukuthi isiRashiya - omunye eziqine kakhulu emhlabeni. Nokho, ukuze ubhala kafushane ngawe ngesiNgisi, kuzothatha izinyanga ezimbalwa ukuqeqeshwa, kodwa uma uphinda lesi senzo amaPolish noma isi-Hungarian, banayo ukuthuthukisa cishe ngonyaka. Ngakho-ke yini ulimi nzima kakhulu emhlabeni? Namuhla sizikhumbula 10 nzima kunazo zonke.
Lwezilimi ezinzima kakhulu emhlabeni: simo
Siye ihlanganiswe uhlu 10 kuya ku-1, 10 endaweni th - lena elula eyinkimbinkimbi, kanye 1st indawo kungokwalabo olusindayo ekufundeni ulimi.
Nangu ukwehla uhlu: Icelandic, isi-Polish, Basque, Estonia, lwesiNavajo, isi-Japanese, isi-Hungarian, Tuy, Arabhu, isi-Chinese. Namuhla sizoxoxa bobathathu.
Ulimi nzima kakhulu emhlabeni, indawo 10
Indlela elula izilimi eziyinkimbinkimbi wazibonakalisa Icelandic, lapho amazwi ziye zalondolozwa kusukela ezikhathini zasendulo. Okungenani e-Europe, ezingaphezu kuka akekho isebenzisa.
Lolu limi alukwazi kahle ukufunda ngaphandle kokuxhumana nge bomdabu abalukhulumayo, ngoba umbhalo akakwazi ukudlulisela imisindo ezisebenzisa Iceland.
Ukuze sikusize ziyacaca kakhulu ngalokho kuba sizilobile manje, vele uzame ukuphimisela leli gama: Eyjafjallajökull. Ngakho wabiza enye izintaba-mlilo e-Iceland. Ingabe ufuna ukuba sifunde lolu limi?
Ulimi nzima kakhulu emhlabeni, indawo 5th
Ngo endaweni yesihlanu simo yethu Japanese. Kuthiwa ungafunda ukufunda izinhlamvu Japanese, kodwa lokhu kunganele ngempela ukuqala ukulukhuluma. Ngaphezu kwalokho, ngisho ubhala eJapane, akuyona elula.
Kukhona izinhlobo ezintathu ke: Kanji, katakana kanye hiragana. Futhi ngisho ngendlela ovelele yokubhala Japanese - ebhaliwe kusuka kwesokudla kuya kwesokunxele, ngo ikholomu. abafundi ikakhulukazi esibi sendawo, ngoba ukuze uthole iziqu zaseyunivesithi odinga ukukwazi izinhlamvu 15,000.
Ulimi nzima kakhulu emhlabeni: endaweni 1st
Indawo yokuqala yokuba yinkimbinkimbi umthetho Chinese, kodwa akuvimbeli yona kubhekwe obanzi kunayo emhlabeni.
Lolu limi linezinhlamvu 87.000, nakuba ungakwazi ukuxhumana kokwazi 800 kuphela, bese ufunde iphephandaba etholakele umuntu linezinhlamvu 3000.
Inkinga wukuthi ulimi lwesiShayina seliphindeke izikhathi ezingaphezu kuka-10 ezilimi eziyimixhantela futhi lulwimi lolubhalwako kungaba kokubili ikholomu kanye nendawo, njengoba baseYurophu.
Namuhla oyifundile mayelana lwezilimi ezinzima kakhulu emhlabeni, ukuthi uhlu kuyohlale kuntula uma ngingenaye ezinye izilimi zezigodi Slavic. Ngeshwa noma ngenhlanhla, okunjalo kwakungeyona isiRashiya, futhi isi-Polish. It kuvela ukuthi lolimi yayo ngisho imithetho njengoba okuhlukile kubo.
Ulimi ezinzima kunazo zonke izizwe Slavic - Polish
Iseluleko sethu iyathanda ukufunda Polish kahle: qala nge ngolimi olulula ezikhulunywayo, futhi kuphela uma kahle, uyokwazi ukuqonda logic of lolimi. Ngokwesibonelo, ngalolu limi, kukhona 7 izimo, futhi ukuqonda ukuthi asetshenziswe kanjani, unga kuphela umkhuba.
Izinhlamvu siqukethe izinhlamvu 32, kodwa abaningi babo kuthiwa ezinguqulweni ezimbili noma ezintathu, ngezindlela ezahlukene. Ikakhulukazi ezithakazelisayo lapho incwadi "l" Polish uphinyiswa "b".
Ngakho-ke zama ngokukhethekile ukuze ungazitholi usungaphansi uzama ukuqonda sula kuphela emagama latayelekile. Kuleli zwe, amazwi ethu Russian ungaba libe nencazelo ehluke ngokuphelele.
Uma ungafuni ukubambana izilimi ezixakile, ukufunda European. Kuthiwa ubuchopho iyakhiwa polyglots ngingcono kakhulu kangangokuthi ukucabanga kwabo futhi ikhono neliphelele kunalelo, kodwa into esemqoka - musa uthole crazy, uze ufundise emagama angaphandle kanye izici pronunciation.
Qala nge-English, bese, mhlawumbe, ukuze uthole Chinese.
"Beeline", ngesilinganiso "zero ukungabaza": indlela vumela noma vimbela (imiyalelo ezinemininingwane)
PC okuphathelene nomngcele: YINI, LAPHO futhi INDLELA